शिरीष/सेतो शिरीष | Our Dream City शिरीष/सेतो शिरीष – Our Dream City
Albizia procera(Roxb.) Benth.
English name: White siris / Silver Bark Rain Tree
सेतो शिरीष उत्तरी भारतबाट दक्षिण-पूर्वी एसिया हुँदै एसियामा ओसिलो पतझर र अर्ध-सदाबहार पहाडी वनहरू, दलदल वनहरू र समतल घाँसे मैदानको रैथाने वनस्पति हो। नेपालमा यो ६५० देखि १३५० मिटरसम्म पाइन्छ।
परिपक्वतामा उचाइ: यो सामान्यतया १०-२० मिटर उचाइ हुने छिटो बढ्ने पतझर रूख हो।
आकार: यसको सीधादेखि थोरै वक्र काण्ड, हल्का खैरो देखि हल्का हरियो खैरो बोक्रा र फैलिएको पातलो वृक्षछत्र हुन्छ। यसको मुना राम्ररी आउँछ।
फूल र फूल फुल्ने: फूल सामान्यतया वर्षाको मौसममा फुल्छ। विशेष रूपमा सुगन्धित (गुडको जस्तो) फूल सानो हाँगाको छेउमा सेतो गोलाकार हुन्छ। फल चेप्टो कोसामा हुन्छ जुन परिपक्व भएपछि हरियोबाट गाढा रातो वा रातो खैरो रङमा परिवर्तन हुन्छ। फूल फुलेको ६-९ महिनापछि, सुख्खा मौसममा फल पाक्छ, र फलको कोसा भएको पूरै हाँगा नखसेसम्म रूखमा नै रहन्छ।
खेती: यी कृषि वन भूमि र चिया बगान क्षेत्रमा खेती गरिन्छ। रूखहरू नाइट्रोजन स्थिरीकरण र माइकोरिजल एसोसिएशनको महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन् जसले माटोको पोषणमा सहायता गर्दछ।
माटो: सेतो शिरीषलाई उर्वर, दोमट, चिस्यान रहने तर पूर्ण घाम वा आंशिक छायामा स्वतन्त्र रूपमा निकास हुने माटो चाहिन्छ। यो धेरै ओसिलो, बलौटे स्थानहरूमा राम्ररी निकास भएको दोमट वा माटोमा राम्रोसँग बढ्छ तर नदी किनारको घाँसे मैदान क्षेत्र, सुख्खा, ढुङ्गा र बलौटे माटोलाई सहन सक्छ।
बीज मे-जुन महिनामा बीजकोषबाट प्राप्त गरिन्छ। बीजहरू खुल्ला स्थितिमा मे महिनामा रोपिन्छन्। अंकुरण हुन लगभग पाँच दिन लाग्छ। नर्सरीमा दुई महिनाको भएपछि मात्र बिरुवा रोपिन्छ। बिरुवाहरूलाई माइकोरिजा गराउने सुनिश्चित गर्न माटोको मिश्रणमा १:२० (५%) मा परिपक्व रूखको माटो चाहिन्छ। बीज सोझै तयार खाडलहरूमा पनि रोप्न सकिन्छ: बिरुवाहरू पहिलो वर्षमा १ मिटरसम्म बढ्नेछन्।
प्रति किलो २०,००० बीज हुन्छन्। बीज ताजा हुँदा ७०% र १० वर्ष भण्डारण पछि ९% सम्म अंकुरित हुन्छन्। कीटनाशक हालेर भण्डारण गर्दा बीजको जैविकत्व१० वर्ष सम्म रहन्छ।
वृक्षरोपण वर्षाको समय भन्दा ठिक पहिले गर्नुपर्छ। स्वस्थ बिरुवाको लागि छापो र माइकोराइजल माटो चाहिन्छ।
काठ मुख्यतया पाङ्ग्रा, खम्बा, ढिकी र कृषि उपकरणहरूमा प्रयोग गरिन्छ। काठबाट गुणस्तरीय कोइला बन्छ। बोक्रा टेनिंगको लागि प्रयोग गरिन्छ, र यसबाट गम निकाल्न सकिन्छ। कतिपय ठाउँमा बोक्रालाई पिठोमा मिसाएर अनिकालको समयमा खाइन्छ।
यसलाई सहरको सानो उद्यान र सहरी तथा कृषि वन क्षेत्रहरूमा व्यवस्थित स्थलहरूमा रोप्न सकिन्छ। खेती गरिएको खेतको छेउमा खेतीलाई प्राथमिकता दिइन्छ।
Pachuau, L., Lalhlenmawia, H., & Mazumder, B. (2012). Characteristics and composition of Albizia procera (Roxb.) Benth gum. Industrial Crops and Products, 40, 90-95.